मन्त्री थापाको सम्पत्ति : सेयरमा करोडौ लगानी, अन्य के-के छन् ? - Arthatantra.com
मन्त्री थापाको सम्पत्ति : सेयरमा करोडौ लगानी, अन्य के-के छन् ?
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु भएको छ । उहाँको सेयर बजारमा मात्रै करोडौ लगानी रहेको देखिएको छ ।
उहाँले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण हेर्दा करोडौ सम्पती देखिएको छ । उहाँको ४ वटा बैंकको सेयरमा लगानी रहेको देखिएको छ ।
उहाँको नाममा मात्रै मेगा बैंक, सेच्चुरी कमर्सियल बैंक, सिद्धार्थ बैंकमा संस्थापक र साधारण सेयर रहेको छ ।
विवरणमा भएको रिपोर्ट अनुसार मन लक्ष्मी थापाको नाममा मेगा बैंकमा संस्थापक सेयर ५० हजार कित्ता, राधा थापा क्षेत्रीको नाममा मेगा बैंकमा संस्थापक र साधारण सेयर २७ हजार ३८१ कित्ता, छोरा सौगात थापाको नाममा मेगा बैंकमा २६ हजार ११३ कित्ता सेयर रहेको देखिएको छ ।
यस्तै स्वयम मन्त्री थापाको नाममा मेगा बैंकमा संस्थापक र साधारण सेयर ४ लाख ६८ हजार ५६ कित्ता, सेन्चुरी बैंकमा ९१ हजार ३६७ कित्ता संस्थापक सेयर, सिद्धार्थ बैंकमा ४३ हजार ७७९ कित्ता संस्थापक र लुम्बिनी विकास बैंकमा ५० हजार ९०९ कित्ता संस्थापक सेयर रहेको छ । यो सबै सेयरको रकम प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यो सेयर किन्न व्यवसाय, सम्पती बेचबिखन तथा तलबी अनुदानबाट आर्जन गरेको पैसा रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै मन्त्री थापाको नाममा १ करोड २० लाख पर्ने गाडी, विभिन्न बैंक तथा सहकारीमा करोडौ रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । मन्त्री थापाको ९० तोला सुन, ५० तोला चाँदी र १५ तोला हिरा रहेको छ । कास्की जिल्लाको पोखराका विभिन्न स्थानमा घर जग्गा रहेको छ ।
मन्त्री थापाको सम्पत्ति
वि.सं.२०७८ भदौ ९ बुधवार १४:४२ मा प्रकाशित
अघिल्लाे टेलिकमका कर्मचारीको आन्दोलन ३७ दिनसम्म पनि देखेन व्यवस्थापनले
पछिल्लाे सेयर बजारमा भारी गिरावट, कारोबार रकम पनि घट्यो